ျမစ္ဆံု ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေအာင္လအန္ဆန္း ေျပာၿပီ – WunYan
ျမစ္ဆံု ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေအာင္လအန္ဆန္း ေျပာၿပီ
ဒီေနရာေတြဟာ ျမစ္ႀကီးနားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ကေလးဘဝအမွတ္တရေတြပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း Katie နဲ႔ Ah De တို႔ကို ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေမြးရပ္ေျမဟာ ဘယ္ေလာက္လွပတယ္ဆိုတာကို မ်က္ျမင္သက္ေသျပခ်င္လို႔ ဒီကိုေရာက္တုန္းမွာ ဒီေနရာေတြကိုပထမဆံုးေခၚလာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ျဖစ္တည္မႈအတြက္ ဒီသဘာဝရတနာႀကီးဟာ အရမ္းကိုတန္ဖိုးႀကီးမားလြန္းလို႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေလာက္ေလးနဲ႔ ကတိကဝတ္ေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔ဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ျဖစ္တည္မႈအတြက္ ဒီသဘာဝရတနာႀကီးဟာ အရမ္းကိုတန္ဖိုးႀကီးမားလြန္းလို႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေလာက္ေလးနဲ႔ ကတိကဝတ္ေတြမျပဳလုပ္ပါနဲ႔ဗ်ာ။ကၽြန္ေတာ့္သား Ah De ေလးနဲ႔ ေနာင္ေမြးဖြားလာမယ့္သူ႔ရဲ႕ကေလးေလးေတြ ႀကီးျပင္းလာတဲ့အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ဒီသဘာဝအလွတရားႀကီးေတြကို ျမင္ေတြ႕ေစခ်င္ပါေသးတယ္။
Source : Aung La Nsang (Burmese Python)
မြစ်ဆုံဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် သဘာဝတရား ကပေးတဲ့လက်ဆောင်ကောင်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရှည်လျားလှတဲ့သမိုင်းနောက်ခံအမွေအနှစ်တွေနဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအနှစ်သာတွေကို ဖော်ကျူးထားတဲ့ပြယုဂ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီပြယုဂ်ကပဲ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုအများကြီးထဲကမှ ကချင်လူမျိုးတွေကို အများကသိအောင် ပြောပြနေပြီး ဆန်းကြယ်လှပတဲ့ဒီနေရာကို တစ်သက်မှာတစ်ခေါက်လာရောက်လည်ပတ်ဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကလေးဘဝတုန်းက မိသားစုနဲ့အတူ အရမ်းအေးတဲ့ မလိခမြစ်နားမှာ ပျော်ပွဲစားထွက်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရလေးတွေကို မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ မြစ်ဆုံနားက N-Mai Hlaing ကိုဖြတ်ပြီး လှေစီးခဲ့ကြတာတွေရောပေါ့။
ဒီနေရာတွေဟာ မြစ်ကြီးနားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ကလေးဘဝအမှတ်တရတွေပါပဲ။ အဲဒါကြောင့်လည်း Katie နဲ့ Ah De တို့ကို ကျွန်တော့်ရဲ့မွေးရပ်မြေဟာ ဘယ်လောက်လှပတယ်ဆိုတာကို မျက်မြင်သက်သေပြချင်လို့ ဒီကိုရောက်တုန်းမှာ ဒီနေရာတွေကိုပထမဆုံးခေါ်လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တည်မှုအတွက် ဒီသဘာဝရတနာကြီးဟာ အရမ်းကိုတန်ဖိုးကြီးမားလွန်းလို့ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လောက်လေးနဲ့ ကတိကဝတ်တွေမပြုလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။
နိုင်ငံတိုင်းဟာ သူတို့ကိုပေးထားတဲ့ သဘာဝတရားကြီးရဲ့လက်ဆောင်တွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမှာ ဖြစ်သလို ကျွန်တော့်သား Ah De အသက်တွေကြီးလာပြီး သူ့ကလေးတွေရလာတဲ့အချိန်အထိ သူ့ကလေးတွေကို ဒီလိုအလှတရားတွေပြနိုင်ဖို့ ဒီမြစ်ဆုံနေရာလေးဟာ အခုလိုမျိုးအမြဲလှပနေစေပါလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
မြန်မာ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာ အမြဲလိုလိုပါဝင်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး လေးစားရပါတဲ့တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတကြီး Xi Jinping ကိုလည်း မြစ်ဆုံဆည်ကြီးမဆောက်လုပ်ဖို့ ကျွန်တော့အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တည်မှုအတွက် ဒီသဘာဝရတနာကြီးဟာ အရမ်းကိုတန်ဖိုးကြီးမားလွန်းလို့ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လောက်လေးနဲ့ ကတိကဝတ်တွေမပြုလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော့်သား Ah De လေးနဲ့ နောင်မွေးဖွားလာမယ့်သူ့ရဲ့ကလေးလေးတွေ ကြီးပြင်းလာတဲ့အထိ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဒီသဘာဝအလှတရားကြီးတွေကို မြင်တွေ့စေချင်ပါသေးတယ်
Myitsone is one of the greatest nature’s blessing to our country. It’s long heritage and cultural significance draw Kachins from all walks of life to visit at least once inalifetime. Asalittle kid, I had fond memories of family picnics near ice-cold Mali Hka and boating through N-Mai Hka at the confluence.
They formed cherished memories of childhood in Myitkyina, and it was first place I wanted Katie and Ah De to witness when I brought them to our homeland. As every country preserve it’s own natural gifts, my wish is Myitsone will remain in current beauty for Ah De to show to his children. China has always played integral role in Myanmar history, and I request HE President Xi Jinping to not construct Myitsone Dam.
This natural treasure is too great ofacost to our nation’s identity to be compromised by electric power or development. I would love to see Ah De and our children’s children to grow up and see the natural beauty our country have to offer.